अब देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अन्तर्वार्ता / अब देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
अब देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
March 9, 2016 अन्तर्वार्ता Leaveacomment
० फर्मुल्लाह मन्सुर, नेता, नेपाली कांग्रेस
१३औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता चलिरहेका बेला बारा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद फर्मुल्लाह मन्सुर संस्थापन समूह छाडेर शेरबहादुर देउवातिर गए। देउवा निवास बूढानिलकण्ठ पुगेर मन्सुरले सभापतिमा देउवालाई समर्थन गरेपछि देउवा समूहले थप बलियो भएको महसुस गरेको थियो। अबको यात्रा देउवासँगै हुने भन्दै उनले गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालासँग नजिक रहेर काम गरेको पनि त्यहीबेला बताएका थिए। सुशील कोइरालाको निधनपछि संस्थापन समूहको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नगराएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका मन्सुुर कोषाध्यक्ष पदका आकांक्षी थिए। तर, रामचन्द्र पौडेलले सीतादेवी यादवलाई उम्मेदवार बनाएपछि मन्सुरको मन संस्थापनतिर झन् बस्न सकेन। अध्यक्षका प्रत्यासी पौडेलले विगतको रिस साँधेको अनुमान गरेका मन्सुरसहितको समर्थनमा देउवा भारी मतले नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा विजयी भए। देउवाको विजयलाई मन्सुरले कसरी लिएका छन्, अबको कांग्रेसको बाटो कस्तो हुनेछ ? यी लगायतका विषयमा मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
शेरबहादुर देउवा अर्का प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेललाई भारी मतले पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित हुनभयो । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिक दलहरुको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी हो । यसको बिरासत थाम्न कांग्रेसमा सयौं नेताहरुको आ–आफ्नै खालको योगदान रहेको छ । अहिले कांग्रेसमा विभिन्न खाले आरोप लाग्ने गरेको छ । कांग्रेसमा गुटको राजनीति भयो भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई एक बनाएर लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्ताको काँधमा आएको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नेता शेरबहादुर देउवा नै हो । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपाली जनताले संविधान पाए । त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि सक्षम नेतृत्व कांग्रेसमा आवश्यक थियो । यसका लागि पनि देउवा नै एक विकल्प हुनुहुन्थ्यो । उहाँको विजयसँगै कांग्रेसको यो जिम्मेवारी पूरा हुने मैले ठानेको छु ।
स्थापना कालदेखि नै कोइराला परिवारको नेतृत्वमा कांग्रेस अघि बढेको इतिहास छ । अझ विगत १९ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा कोइराला परिवारकै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस यो पटक कोइराला परिवारबाट बाहिर गएको छ । यसलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ ?
म विस २०२८ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छु । बीपी कोइराला बनारसमा रहेकै बेलादेखि म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका कारण मैले उहाँसँग नजिक भएर काम गर्ने मौका पाएँ । कृष्णजीसँग पनि मैले निकै नजिक भएर काम गर्ने मौका पाएँ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पनि सामिप्यमा रहेर मैले काम गर्ने मौका पाएँ । उहाँहरु सबैले निष्ठापूर्वक काम गर्नुभएको मैले ठानेको छु । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग म नजिक भएर काम गरेकै बेला शेरबहादुर देउवाहरु नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो । मैले उहाँहरुको त्यो कदमको त्यतिबेला खुलेर विरोध गरेकै हो । पछि उहाँहरु फेरि एक हुनुभयो । उहाँहरु एक भएपछि पनि पार्टीमा उहाँहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो । तर, म पार्टी एक भएपछि सबैलाई समान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएँ । पार्टीमा विभिन्न खाले धार बढाएर जाँदा त्यसले पार्टीलाई हानि गर्छ भन्ने अडान पनि मैले राख्दै आएको हुँ । पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा पनि मैले यही कुरालाई अघि सार्दै आएँ । पटक–पटक पार्टीमा देखिएका धारहरुलाई अन्त्य गरेर अघि बढौं भने । तर, त्यो त्यति सफल हुन सकेन ।
त्यो सम्भव नभएपछि तपाईंले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभएको हो ?
एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तै हो । सुशील कोइरालाको मृत्युपछि कांग्रेसलाई एक बनाएर लैजाने क्षमता मैले देउवामै देखें । मैले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान देउवाकै आवश्यकता देखेर अबको यात्रा देउवासँगै गर्ने निर्णय गरेर १३औं महाधिवेशनमा उहाँलाई साथ दिएको हो ।
भनेपछि शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भएपछि पार्टी एक ढिक्का हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
मेरो सोंच त्यही भएर मैले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हो । मेरो जस्तै सोंच अरु प्रतिनिधिहरुमा पनि रहेको पाएँ । त्यही भएर बहुमत प्रतिनिधिले उहाँलाई समर्थन गरेका छन् । उहाँले पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने कुरामा म र कांग्रेसका अधिकांश सदस्य ढुक्क छौं ।
कांग्रेसमा अब ६०–४० को विवाद पनि अन्त्य हुन्छ होइन त ?
उहाँले सभापतिका प्रत्यासीद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत सबैको भूमिका तथा योगदानलाई आफूले सम्मान गर्ने बताउनुभएको छ । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने भन्दै उहाँले कसैलाई काखापाखा नगर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँको यो भनाइले पनि ६० र ४० को भागबन्डा सधैंका लागि अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । उहाँले योग्यता र क्षमताअनुसार पार्टीमा सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेकाले म आशावादी छु । आगामी दिनमा पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई कसैले पनि हार र जितको विषय बनाउनु हुँदैन । हार्नेले पनि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
शेरबहादुर देउवा सभापति भएपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार फेरबदल हुने पनि हल्ला चलेको छ नि ?
स्वाभाविकै रुपमा अहिलेको सरकार सबै नेपाली जनताको सरकार बन्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन यो सरकारले जनताका पक्षमा पनि काम गर्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्यो, तर ओली सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने केही पनि देखिंदैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । यसको कार्यान्वयन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नै बाहिर राखेर गठन भएको यो सरकार अप्राकृतिक गठबन्धन बनेको छ । अब राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ । यो भनेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । दुई तिहाइले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न र आन्दोलनरत दलहरुलाई समेट्न पनि राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ । राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व ठूलो दल भएको हिसाबले कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ । ओली सरकार गठन भएपछि नेपालमा कालोबजारी मौलाएको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि ओली सरकारको आयु सकिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीजस्ता गतिविधि पनि ओली सरकारकै पालामा भए । सबै कुराको अन्त्यका लागि पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नेतृत्व कसले गर्ने सम्भावना छ ?
यो सहज अनुमान गर्ने कुरा हो । शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ । पार्टी सभापति पनि उहाँ नै भएपछि आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको शेरबहादुर देउवाले नै हो । उहाँको विकल्प छैन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अरु दललाई पनि समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । तराई–मधेश र अन्य समुदायका पनि माग पूरा गर्न सकिन्छ र देशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने ढोका खुल्छ ।
भानु खरेल टेक्सस च्याप्टर अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार (एनआरएनए युएसए) तपाईको उम्मेद्वारी किन ? सामाजिक सेवा …